Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » 2018 » September » 19
Maxaa hortaagan kursigii xildhibaanimo ee Beesha Galedi, “Maxaana loo qaban la’yahay tartanka”
Weli waxaa isa soo taraya buuqii ka taagnaa kursiga xildhibaanimo ee beesha Galedi oo aan weli wax xal ah laga gaarin Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka weli waxa ay ku howlan yihiin sida xal cadaalad iyo sinaan ku dheehantahay looga gaari lahaa Islamarkaana doorasho xaal ah uga...
Sarkaal ka tirsan Malateriga Oo Ruux kale oo Rayid ah ku Dilay Magaalada Baladweyne
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in kooxo hubaysan xalay iyo shalay galab casir liiqii dil ay ka gaysteen Magaalada gudaheeda. Dilka shalay galab dhacay ayaa waxaa loo gaystay nin lagu magacaabi jiray marxuun Cumar Dacar oo si wayn...
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo Maanta Soo Gaba gabeynayo Doodooda Arimaha Amniga
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay soo gaba gabeynayaan dooda la xiriirta ammaanka Magaalada Muqdisho, kaasi oo daba socda kulamadii shalay iyo maalinkii ka horeysay ee looga hadlaayay amniga Muqdisho. Xildhibaano ka mid ah mudanayaasha...
ONLF iyo Itoobiya oo wada hadal ugu Socda Asmara
Wafdi ka socda Ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa Magaalada Asmara ee Caasimadda dalka Eritrea kulan kula yeeshay hoggaanka sare ee Ururka ONLF. Dhinaca wafdiga dalka Itoobiya ka socda waxaa hoggaaminaya Wasiirka Warfaafinta Dowladda Federaalka Itoobiya ahna...
Diyaarada Duqeyn ka geystay Degmada Saakow Ee Jubada dhexe
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Degmada Saakow ee Gobolka Jubbada dhexe, diyaarado dagaal ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay duqeyn ka gaysteen deegaankaasi. Duqeynta oo ay fulisay diyaarad dagaal, ayaa lagu soo waramayaa in lala eegtay goob Kuleej ah iyo Isbitaalka...
Kooxo Hubeysan oo Dil ka Gestay Magalada Muqdisho
Kooxo hubaysan ayaa ruux rayid ah goor dhaweyd waxa ay ku dileen Xaafadda Daallo ee Degmada Hawlwadaag, sida ay xaqiijinayaan dadka deegaanka. Dilka ayaa wuxuu ka dhacay goob Bosteejo ah oo gaadiidka basaska laga raro, waxaana wararka ay sheegayaan ruuxa la dilay inuu qof ka...
Madaxweyne Hirshabele Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in is Afgarad uu la Gaaray Dawlada federalka
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, ayaa sheegay in dowladda Federalka Somaliya iyo Maamulka Hirshabelle ay iska afgarteen tabashadii ay qabeen madaxda Maamulka Hirshabelle. Waare oo Saxaafadda la hadlay, ayaa wuxuu sheegay wada hadal dhexmaray dowladda...
Madaxweynaha Puntland oo Safar Shaqa ku tagay Magaalada Qardho
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar shaqo ugu ambabaxay gobolada Karkaar iyo Sanaag ee Puntland. Madaxweyne Gaas ayaa maanta gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, waxaana ku soo dhaweeyey maamulka gobolka, kan...
Madaxweynaha jubaland oo la kulmay Wafdi ka Socda Aqalka Sare
Wafdigan oo ka kooban toban Xubnood oo ka tirsan Aqalka sare ayaa la kulmay Madaxweynaha Dowald Gobaleedka Jubbaland Axmed Madoobe, Labadiisa kuxigeen, Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland, Wasiiro iyo Xildhibaano. Guddigan oo shalay gaaray magaalada Kismaayo ayaa ujeedadoodu...
Wafdi ka socda Aqalka Sare oo Gaaray Magalada Dhuusamareeb ee Galmudug
Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug maanta oo Talaado ah waxaa gaaray wafdi ka socda Golaha Aqalka Sare ee Barlamaanka Soomaaliya oo uu hogaaminayay Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid). Wafdiga Aqalka sare ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay madaxa xukuumadda...